Home » Nkwari akụ na nkwari akụ » Ọkara n'ime ụlọ nkwari akụ Thailand nwere ike mechie ọnwa Ọgọst
Bank of Thailand (BOT) mere nnyocha nyocha banyere họtelu ma maa ọkwa na ọ na-atụ anya ka ikuku coronavirus nke atọ nke mba ahụ belata ọnụ ọgụgụ ndị bi na họtel nke mba ahụ ka ọ bụrụ naanị pasent 9 n'ọnwa a.
Nnyocha ahụ gosipụtara ọnụego ụlọ nkwari akụ nọ ihe dị ka pasent 18 n'ọnwa gara aga na ọkara ọkara n'ọnwa a.
Pasent 19 nke ndị na-arụ ọrụ ụlọ nkwari akụ na-ekwu na nke atọ nke a COVID-XNUMX dị njọ karịa nke abụọ.
Ugbu a, ihe dịka pasent 39 nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ areụ ka na-emeghe ma na-erughị pasent 10 nke ego ha na-akpata.
BOT kwuru na nyocha ahụ gosipụtara ọnụ ọgụgụ ndị bi na 18 pasent na Eprel na naanị 9 pasent na Mee. Na ọnụego ahụ, pasent 47 nke ụlọ nkwari akụ Thailand ga-akwụsị ọrụ n'ime ọnwa 3. Pasent XNUMX nke ndị ọrụ na-atụle ebili mmiri nke atọ dị ugbu a karịa nke abụọ, nke malitere site na Krismas ruo na ngwụsị nke Jenụwarị.
N'ihi na ihe karịrị pasent 51 nke ndapụ kagburu na Eprel, nke na-ewu ewu Thailand ihe omume nke Songkran enwetaghị ihe ịga nke ọma karịa ka ọ tụrụ anya ya, nkwonkwo njikọ BOT-Thai Hotels Association nyochara. Naanị pasent 46 nke ụlọ oriri na nkwari akụ nke mba ugbu a na-emepe emepe, na-emechi pasent 13 nwa oge ma ndị ọzọ nwere obere awa ma ọ bụ ikike.
Njikọ njikọ nke BOT-Thai Hotels Association kwubiri pasent 51 nke ndaputa kagburu na Eprel, na-eme Songkran obere ihe ịga nke ọma karịa atụ anya ya. Ka ọ dị ugbu a, ihe dịka pasent 39 nke ụlọ oriri na ọ stillụ stillụ ka mepere erughị pasent 10 nke ego ha na-akpata na ihe karịrị pesenti 25 ọkara ọkara.
THA akpọwo oku ugboro ugboro maka enyemaka gọọmentị, gụnyere enyemaka ego ndị ọrụ, ụgwọ ụgwọ ụgwọ na njem mkpali na-akpali atụmatụ ịlụ ọgụ mmetụta nke COVID-19.